Tencent ၏ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂိမ်းသည် PUBG မိုဘိုင်းကိုအစားထိုးခြင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ကြီးမားသောထိခိုက်မှုဖြစ်သည် Androidsis
Tencent ၏ 'ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂိမ်း' PUBG Mobile ကိုအစားထိုးခြင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်
Tencent သည် PUBG Mobile ဂိမ်းနောက်ကွယ်မှကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် PlayerUnknown Battlegrounds (PUBG) နှင့်အစားထိုးမည့်ဂိမ်းကိုမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည်။ "ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂိမ်း" ("ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂိမ်း" အဖြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်)။ ဒီဟာတရုတ်ကိုသွားတယ်
အစီရင်ခံစာအရ, ဂိမ်းကိုစတင်ပြီး ၇၂ နာရီအကြာတွင်ဝင်ငွေများစတင်ရရှိခဲ့သည် ကျော် $ 14 သန်းထမြောက်တော်မူ.
iOS အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂိမ်းဖြစ်သည် Apple ၏တရုတ်အက်ပလီကေးရှင်းတွင်အများဆုံး downloaded နှင့်စုစုပေါင်းအခမဲ့ဂိမ်းဖြစ်သည်, အာရုံခံမျှော်စင်ဒေတာအရသိရသည်။ Tencent သည်ဝင်ငွေအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂိမ်းထုတ်ဝေသူဖြစ်သောကြောင့်ယခုအခါလူကြိုက်များသောစစ်ပွဲများအတွက်တော်ဝင်အမျိုးအစားအတွက်အသုံးပြုသူအမြောက်အများမှ ၀ င်ငွေများရရှိနေသည်။
Tencent သည် PUBG ဂိမ်း၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းဖြင့်တရုတ်ပြည်တွင်ငွေရှာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် စည်းမျဉ်းများနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာကိုအစိုးရကနှိမ်နင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထိုခေါင်းစဉ်ကိုပိတ်ပြီး 'ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂိမ်း' အသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂိမ်းသည်လည်းအလားတူဂိမ်းမျိုးရှိသည် အသုံးပြုသူများကို၎င်းတို့၏ PUBG မိုဘိုင်းဒေတာကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုသည်။ Tencent သည်ခေါင်းစဉ်အသစ်မှ ၀ င်ငွေရရှိရန်ပြီးခဲ့သည့်လကခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူများသည်ကစားသောအခါအရေခွံနှင့်အခြားဂိမ်းကစားပစ္စည်းများချက်ချင်း ၀ ယ်နိုင်သည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြောင်းလဲခြင်းအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသည်တီဗွီအစီအစဉ်မှသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများအထိအကြမ်းဖက်မှု၊ လိင်နှင့်နိုင်ငံရေးအရထိခိုက်လွယ်သောအကြောင်းအရာများကိုတားမြစ်ထားသည်။ ကလေးများ၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဂိမ်းစွဲလမ်းမှုကိုတားဆီးရန်အတွက်အစိုးရ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂိမ်းကိုအသက် ၁၆ နှစ်နှင့်အထက်ကစားသမားများသာရရှိနိုင်သည်.
PUBG Mobile သည်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်နေ့စဉ်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကိုစမ်းသပ်သည်
အခြားတစ်ဖက်တွင်, လောင်းကစားကာလကိုတစ်နေ့လျှင်နှစ်နာရီအထိကန့်သတ်လိမ့်မည်ဟုကုမ္ပဏီကကြေငြာခဲ့သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဂိမ်း၏ဖော်ပြချက်အရ Game for Peace သည်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏လေတပ်အားတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဂုဏ်ပြုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Tencent ၏ 'ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂိမ်း' PUBG Mobile ကိုအစားထိုးခြင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်
အခုဆိုရင် Play Games ဟာတကယ်ကိုအေးပါတယ်
Huawei Y9 Prime 2019 ကိုတရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ်တန်းစားရုပ်သိမ်းနိုင်သည့်ကင်မရာဖြစ်သည်